Mamely vera hamoronana sarin'ny olona | Famoronana an-tserasera
Afaka i Simon Berger antsoy ho toy ny mpanao sary hosodoko amin'ny fitaratra rehefa mamorona sary miaraka amin'ity fitaovana ity. Saingy ilay izy dia tsy ataony araka ny misy azy, fa maka vera eo am-baravarankely izy ary manomboka mamely azy amin'ny toerana sasany mba hamoronana sarin'olona iray.
Andao lazaina fa mahay mamorona ianaorte manimba zavatra isan'andro ary amin'izany dia mila mitandrina tsara izy mba ho potika tanteraka ny asany. Ary tokony hitandrina tsara ianao amin'ny famelezana ireo kapoka hamelomana endrika ny olona iray.
Miaraka amina paiso sy tantanana niantso ity mpanakanto ity Simon Berger dia mitanisa anay amin'ny sanganasa fitaratra izay vita dia mihoatra ny tsara. Fomba famoronana iray hahatakarana ny fanimbana, na dia tsy te hiantso ny famakiana vera aza isika eto ary handray izay tiana hiezahana "hisarihana" ny tavan'ny namana.
Asa iray izay amin'ny antsipiriany dia sarotra ny mahatakatra ny tanjona, fa raha mijery azy isika ary mijery azy amin'ny fomba hafa, dia hanomboka isika hitaona ireo fiasa sy endrika sarin'ny olona.
Berger dia manana traikefa amin'ity fitaovana ity ary nampiasainy hamoronana teknika famoronana izay mety tsy manam-paharoa mihitsy aza. Mpandrafitra efa za-draharaha izay nanomboka ny lafiny noforoniny indrindra tamin'ny hazo mba hampiasa fitaovana hafa toy ny fitaratra.
Amin'ny fizotranao mamorona asio marika ireo toerana tsy tianao vakiana ireo ary ny hafa izay mety mahavoa azy, na dia tsy manao ny simba ilaina aza izy ireo ka mety hiteraka vaky tanteraka ilay sombin-javatra. Manana ny tranonkalanao ianao hahafantatra anao akaiky kokoa.
Un vera manokana manokana ilay ilainao amin'ny alàlan'ny famelezana azy ary ny banga ilaina dia azo foronina hamoronana ny sombin-javatra farany. Luke Jerram koa dia mampiasa ny kristaly toy ny akora.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Manaova sary amin'ny alàlan'ny fikapohana ampahany manokana amin'ny vera
Kaonty Instagram miresaka 4